အချင်းချင်း သွေးမကွဲပဲ ရည်ရွယ်ချက်မပျောက်ပဲ တန်ဖိုးထားကြဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြားလာတဲ့ အဆိုတော်အောင်ထက် – Cele Top Stars
April 28, 2021 By admin2Celebrity
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ဂီတလောကမှာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိပြီး အသံပါဝါကောင်းကောင်း နဲ့ သီချင်းကောင်းတွေ သီဆိုတတ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို အခိုင်အမာရရှိထားသူကတော့ အဆိုတော်အောင်ထက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။အောင်ထက်ကတော့ “အိပ်မက်စုံရာ” သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲကြီးနေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို စတင်ရရှိကာ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းမှာ လျှောက်လှမ်းနေပြီး လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားတည်း ရပ်တည်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို အင်တိုက်အားတိုက် ပြုလုပ်တာတွေကြောင့် ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားခြင်းခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲကတစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ အောင်ထက်ကတော့ လတ်တလောက်မှာလည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အားဖြည့်ပါဝင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။အောင်ထက်ကတော့ ရည်ရွယ်ချက်မပျောက်၊ သွေးမအေး သွားဘဲ အချင်းချင်းတန်ဖိုးထားကြဖို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကနေ ပြည်သူပရိသတ်တွေကို တိုက်တွန်းပြောပြလာပါတယ်..။
“ရည်ရွယ်ချက် မပျောက်ကြေးသွေးမ ကွဲကြေးအချင်းချင်း တန်ဖိုး ထားကြေးမမေ့ကြေးအရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်✊✊✊
RejectMilitaryCoup WeWantDemocracy Civil_Disobedience_Movement SaveMyammar. .” ဆိုပြီး ရေးသားပြောပြထားတာပါ..။ပရိသတ်တွေကလည်း အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ဖို့အတွက် အားလုံးနဲ့အတူ ကြိုးစားပါဝင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့အတူ အောင်ထက်ကိုလည်း အားပေးစကားတွေ အသီးသီးပြောထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
Source – Aung Htet’s Fb Acc
ပရိသတျကွီးရေ.. ဂီတလောကမှာ ဆှဲဆောငျမှု ရှိပွီး အသံပါဝါကောငျးကောငျး နဲ့ သီခငျြးကောငျးတှေ သီဆိုတတျတာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ တဈခဲနကျအားပေးခဈြခငျမှုတှကေို အခိုငျအမာရရှိထားသူကတော့ အဆိုတျောအောငျထကျပဲဖွဈပါတယျနျော..။အောငျထကျကတော့ “အိပျမကျစုံရာ” သီခငျြးဆို ပွိုငျပှဲကွီးနေ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုတှကေို စတငျရရှိကာ အောငျမွငျမှုလမျးကွောငျးမှာ လြှောကျလှမျးနပွေီး လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့အခွအေနတှေမှောလညျး ပွညျသူတှနေဲ့တဈသားတညျး ရပျတညျနသေူပဲ ဖွဈပါတယျ..။
လူထုလှုပျရှားမှုတှကေို အငျတိုကျအားတိုကျ ပွုလုပျတာတှကွေောငျ့ ၅၀၅ က ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့အရေးယူထားခွငျးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှငျတှထေဲကတဈယောကျအပါအဝငျဖွဈတဲ့ အောငျထကျကတော့ လတျတလောကျမှာလညျး တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ အားဖွညျ့ပါဝငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ..။အောငျထကျကတော့ ရညျရှယျခကျြမပြောကျ၊ သှေးမအေး သှားဘဲ အခငျြးခငျြးတနျဖိုးထားကွဖို့ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာကနေ ပွညျသူပရိသတျတှကေို တိုကျတှနျးပွောပွလာပါတယျ..။
“ရညျရှယျခကျြ မပြောကျကွေးသှေးမ ကှဲကွေးအခငျြးခငျြး တနျဖိုး ထားကွေးမမကွေ့ေးအရေးတျောပုံ အောငျရမညျ✊✊✊
RejectMilitaryCoup WeWantDemocracy Civil_Disobedience_Movement SaveMyammar. .” ဆိုပွီး ရေးသားပွောပွထားတာပါ..။ပရိသတျတှကေလညျး အရေးတျောပုံအောငျမွငျဖို့အတှကျ အားလုံးနဲ့အတူ ကွိုးစားပါဝငျနကွေတဲ့အကွောငျးတှနေဲ့အတူ အောငျထကျကိုလညျး အားပေးစကားတှေ အသီးသီးပွောထားကွတာလညျး တှရေ့ပါတယျ..။